Home News Ciidanka ilaalada Farmaajo iyo kuwa Kheyre oo laga baqaayo in ay berito...
Ciidanka ilaalada Farmaajo iyo kuwa Kheyre oo laga baqaayo in ay berito isku dhacaan. Sabab?
Waxaa sadaxdii maalin ee u danbeeysay ka jiray xarunta Villa Soomaaliya oo ay wada dagan yihiin MW Farmaajo iyo RW Kheyre cabsi iyo kala baqasho dhanka ciidamada ilaaladaha ah. Maanta waxaa shaqaalaha Madaxtooyada loo diiday in ay sidii ay horay ugu gali jireen Madaxtooyada ugu galaan , waxaa lagu soo roday qaab cusub oo uu keensaday RW Kheyre taas cabsi badan galisay shaqaalaha ka shaqeeyo xafiiska Madaxweyanaha.
Dhanka kale waxaa magaalada Muqadishu la isla dhex marayaa in isku daygii dilka ee MW Farmaajo ee fashilmay uu qayb ka ahaa RW Kheyre ama kooxaha isaga ku dhaw dhawa. Hadaba berito ayaa waxaa laga yaabaa in uu ku soo noqdo magaalada Muqadishu MW Farmaajo iyada oo ay jirto cabsi dhanka amaankiisa ah. Ciidamada ilaaliya MW Farmaajo ayaa berito waxa ay ku jiraan dhiifoonaan iyo in aan la ogaan xiliga Madaxweynaha imaanyo iyo goobta uu soo mari doono. Dhanka kale RW Kheyre ayaa isagana rabo in uu iska beri yeelo dareenka ka jira Madaxtooyada ayaa waxa uu go’aansaday in uu berito Madaxweynaha ku soo dhaweeyo garoonka diyaaradaha. Arintaan ayaa caawa waxa ay abuurtay wal-wal cusub oo keeni karo in maalinta berito ah isku dhac dagaal uu dhex maro ciidamada kala waardiyeeyo labada mas’uul. Waxaa caawa lagula taliyay RW Kheyre in uu ku ekaado gurigiisa oo uusan tagin garoonka diyaaradaha berito laakiin wali waa uu ku adkeeysanaa inuu garoonka ku soo dhaweeyo Madaxweynaha.
Previous articleKoox Hubeeysan oo Askari ku Toogtay Magaalada Muqdisho
Next articleWafdi ka socda Somaliland oo kulan gaar ah la qaatay MW Farmaajo
Garoonka Aadan Cadde oo Goor Dhaweyd Kaso Dagtay Diyaarad Sida Maxaabiis...
Aqriso:-Weerar Madaafiic ah oo lagu qaaday Saldhigga Booliska Ee Gobolka Bari